Vaovao - Azo hosodoko ve ny decking WPC?
Azo hosodoko ve ny decking WPC?
Ny fametahana WPC dia fohy ho an'ny plastika vita amin'ny kitapo hazo sy volavolan-javatra mitambatra, malaza kokoa eran'izao tontolo izao izy io.Raha milazalaza momba ny paosin-javatra fitambaran-trano izahay dia milaza foana fa ny hosotra WPC dia tsy misy sary hosodoko, tsy misy lakaoly, ambany fikolokoloana. Avy eo mety hisy olona hafangaro fa azo hosodoko ireo takelaka fanaovana takelaka WPC? Raha afaka , ahoana ny fandokoana ny decking WPC vita amin'ny ivelany?
Mazava ho azy fa azontsika atao ny mandoko ny fitambaran-tarehy, mety hitovy amin'ny hazo mafy hafa izy indraindray. Indraindray mila loko hafa isika na ny fametahana tarehy anao dia mampiseho fanjavona, avy eo angamba ny fotoana handraisana izany eo am-pelatananao. Tokony hanamboatra borosy ianao, loko vitsivitsy sy fitaovana ilaina hafa, avy eo afaka manomboka mandoko ny decking WPC ivelany.
Voalohany: esory na afeno ireo zavamaniry. Raha manana ala mikitroka amin'ny takelaka fanaovana takelaka WPC ianao dia mila manarona sy ravina rehetra amin'ny ravina lamba na ravina plastika na esorina ao amin'ny Fitaovana WPC.
Faharoa: Diovy ny tokotaninao. Misy ny takelaka WPC ampiasain'ny anao manokana, azonao atao ny manadio mora foana ny fametahana endrika WPC anao rehefa manomana hoso-doko ianao. Ho an'ny fanadiovana ny fako sy ny loto, ampiasao fangaro rano misy savony ary fanasana herinaratra ambany na borosy malefaka. Ho fanesorana ny bobongolo sy ny bobongolo dia tianao ny afangaro amin'ny vinaingitra roa sy rano iray ao anaty siny. Diovina tsara ary avelao ho maina.
Fahatelo: Fenoy ny tokotanin-tsambonao ary ataovy izay hahatonga azy ireo hoso-doko malefaka indrindra azo atao, azonao atao ny manaparitaka ny fametahana hazo WPC anao mankany amin'ny làlan'ny voamaina mba hamelana sy hikolokoloana ireo takelaka vita amin'ny lamba. kifafa iray ary sasao amin'ny rano indray mandeha. misafidiana primer exterior latex acrylic ary arotsaho ao anaty fitoeram-roller ny siny.
Fahefatra: hosodoko ny decking WPC ivelany.Raha maina ny 100% ny primer dia afaka mandraraka ianao
ny loko efi-tranonao ivelany mankany anaty fitoeran-tsolika ary miasa ianao. Avereno indray, alao antoka fa avelao ho maina tanteraka ilay rindrambaiko voalohany alohan'ny hametrahana palitao faharoa mety. Hafa ny fotoana maina.ka mila manamarina ny marika momba ny vokatra ianao mandritra ny fotoana fampiharana fampiharana.
Ho fanampin'izay, loko inona no tadiavinao, omaninao fotsiny ny sary hosodoko. Manantena aho fa hanana fiainana voajanahary bebe kokoa amin'ny vokatra WPC ianao.
fametahana plastika vita amin'ny hazo, Fanapahan-tsokosoko WPC, Fanesorana WPC ivelany, Rihana fametahana WPC, Fitaovana WPC, Fanesorana ivelany WPC,